ကိုယ့်ကွန်ပြူတာက အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် ပြတ်ပြတ်ကျတတ်တာကိုတော့ သတိထားမိနေပါတယ်။ ဟိုတလောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ပို့ပေးလိုက်တာကို ဘယ်လိုမှ ဒေါင်းလုပ် လုပ်မရ။ တခြားကွန်ပြူတာက လုပ်မှရတယ်။ YouTube တချို့ဗီဒိုယိုဖိုင်တွေကိုလည်း ဖွင့်ကြည့်လို့ မရပြန်ဘူး။ ဒါနဲ့ တခုခုတော့ မှားနေပြီလို့ ရိပ်မိလာတယ်။ Anti Virus အသစ်လဲ တပ်လိုက်တယ်။ Scan လုပ်ပြီး ဖျက်ရမယ့်ဟာ ဖျက်လိုက်ပေမယ့်လည်း ကောင်းမလာဘူး။ ဒါနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာကို ဂူဂဲလုပ်ပြီး ရှာဖတ်တော့ ထရိုဂျန် တမျိုးမျိုး ၀င်နေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ရယ် ၀မ်းမ် ရယ် ထရိုဂျန်ရယ်က မတူပုံကိုလည်း ဖတ်လိုက်တယ်။ ထရိုဂျန်ဆိုတာ တကယ် ၀င်နေလား မသိပါဘူး။ ထိလွယ်ရှလွယ် ကဗျာကောင်ကြီးပီပီ ကဗျာတစ်ပုဒ်တော့ ဖြစ်သွားပြန်တယ်။
သွားနေကျ ဆိုက်တခုခုက အစပြုခဲ့မယ်
သုံး လေး လလောက်ထင်တာပဲ
ပရိုဂရမ် ကောင်းကောင်း မသွားနိုင်တာကြာပေါ့
ကူးစက်ရောဂါလိုလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး တဲ့
အဝေးက ထိန်းချုပ်မှု တခုခုအောက်မှာ
သက်ပြင်းချပြီး အစက ပြန်ပြန်စနေရတော့တယ်။
Posted by pandora at 8:53 PM
Please use Linux :P
ထိလွယ်ရှလွယ် ကဗျာ ကောင်ကြီးရဲ့ ကဗျာ ကို လာခံစား သွားပါတယ် :D
ဖောမက် သာ ချထည့်လိုက်။….
ချိန်ကိုက်ဗုံးလို မပေါက်ကွဲခင် အချိန်မှီပြင်လိုက်(သို့ ) အသစ်တလုံးပြေးဝယ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ။
ထရိုဂျန် ကိုကဗျာလေးဖွင့်ဆိုထားတာ ဂွတယ်ဗျ ကျနော့်စက်လဲ ဒါပေမယ့် မလုပ်တတ်လို့ဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက် ကလိလိုက်တယ် ပျက်သွားတော့ ဆိုင်ပို့ လိုက်ကော ကောင်းသွားတယ်လေ ဟားဟား ပြင်ခတော့ ရုံးကပေးရတာပေါ့ ကိုယ်မှမကုန်တာ။
အင်း..မဟုတ်မှ လွဲရော။ စက်ထဲမှာတင် ထရိုဂျန် ရောက်တာ မဟုတ်လောက်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာလဲ ရောက်နေပုံရတယ်။ ဟုတ်?
ဒုံးစိုင်းများဝင်ချလာလိုက်ရင် အခက်ပေါ့ အရီးပန်ရေ..။
ထရိုဂျန်အတွက် အကြံကောင်းများ ပေးသွားသော အားပေးသွားသော Linux Promoter ကိုစိုးထက် ကိုပေါ မHT မောင်မျိုး ကိုအက္ခရ မမေငြိမ်းတို့ ကျေးဇူးပါ။
လောလောဆယ်တော့ ကြိုးစားပမ်းစား ထုတ်လိုက်ရမှာ ပျင်းကလည်းပျင်း အချိန်ကလည်းမရသေး. မွေးထားပါရစေဦး။